Ajjeechaa Kaashogjii: Saawudiin gaaffii shakkama Turkii gaafattee - Oromia Broadcasting Network - OBN
Ajjeechaa Jamaal Kashoogjii ilaalchisee shakkaman Turkiin akka dabarfamanii kennamaniif gaafatte didan.
Adeel al-Jubiir akkas jedhan: “Nuti lammileen keenya dabarsinee hin kenninu.”
Torban tokkoon dura Pirezedaantiin Turkii Riikaap Xayyiib Erdogaan akka dabarfamanii kennamaniif kan gaafatee ture yommuu ta’u Roobii ammoo manni murtii Turkii ajaja akka qabamuu qabanii baaseera.
“Aanga’oonni Turkii akka nuti itti isaan eegnetti miti kan argaman,” jechuudhaan madda oduu AFP ‘tti kan himan.
“Michoota keenya warra Turkii odeeffannoo mana murtii irratti itti fayyadamnu isaan gaafanneerra. Garuu akkaataa gaafanneefi argachuu qabnuun hin argatiin jirra. “
Abbaan alangaa biyyattii akka jedhetti Kashogjiin qoontsilaa sana keessatti sababii “gocha dabaa gaggeeffameen” kan ajaja qondaala tokkootiin taasifameen ajjeefame.
Kashogjiin yeroo qabamee wallaansoo qabaa turetti marfee summii waraanamuun ajjeefame. Booda irra ammoo qaama isaa qoontsilaa keessatti mummuranii/kukkutanii Khashoogjii warreen qoontsilaa alaan “waliin tumsan” kennamuu abbaan alangaa kun dubbateera.
Akka gaazexeessaa bekkamaa tokkootti oduuwwan gurguddoo waraana Sooviyeeti Agaanistaan irratti taasifte, akkasumas ka’umsa Osaamaa Biin Laaden ilaalchisee dhaabbileen sabaa himaalee Sawudii gara garaatiif barreessaa ture.Waggoota kurnaniif maatii moototaa Sawudiitti dhiyeenyaan akka gorsaa mootummaattis tajaajilaa tureera.
Garuu waan taasifamu mormee/dhiisee bara darbe ture kan gara US’tti baqatee. Biyya itti baqate kana irraas gaazexee Waashingiteen Post jedhuuf kan barreessaa ture yommuu ta’u achi keessattis ilmaa mootichaa Mohammed biin Saalman qeeqaa ture.Maddi:-BBC
Total Hits : 53916